musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Sustainability News » Kubatanidza Yekushanya Yakasimba Nesimba Rinovandudzwa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sustainable Tourism uye Renewable Energy
Kubatanidza maindasitiri ane pfungwa dzakafanana, kuitira kuti vagadzire masango e synergetic hachisi chinhu chitsva. Chinongedzo ndechekuti simba Renewable sechinhu chinowanikwa kune 'kusimudzira' chirevo cheKufamba neKushanya ... pamwero mukuru.
Zvakatipoteredza zvakashatiswa zvakanyanya, uye nhamba inowedzera yevashanyi pamberi peCovid-19 yagadzira vafambi nzvimbo dzekutenderera dzeHotel.
Kana isu tikawedzera kukusvibisa kukanganisa kweshanduko yemamiriro ekunze kusanganisira denda, isu tinoziva zvishoma zvishoma kupfuura budiriro iri pamharadzano dzenzira.
Kushandura mafashama kubva kuzvisaririra kusvika kuNjodzi Inovandudzwa zvinoreva kutanga padombo rezasi kweiyo 'cheni yekusimudzira'.
Mushure mezvose, Renewable Energy yanga ichibuda kubva kune dzakasiyana nzvimbo yehuswa-mudzi kuyedza makumi emakore apfuura kune yakakosha uye yakafara-yakapararira 'girini' simba sosi nhasi.
Renewable Energy ndeyezvakatipoteredza, kuzvimiririra uye kusaganhurirwa; hapana chikonzero chekuchirwira. Zvese Sustainable Tourism uye Renewable Energy vanogovana zvakafanana pfungwa. Uchishandisa yavo yekukanganisa kukanganisa, ese maindasitiri anowedzerana uye anozadzisana.
Maitiro edu ekusimudzira anoratidzwa zvakajeka mumamiriro ezvinhu epanyama uye nekunze kwekuonekwa kwedu pachedu nharaunda yedu. Pfungwa yacho haigare ichifadza: Zvivakwa zviri kuora, nzvimbo dzakasviba nemigwagwa ine makomba, nzizi dzakasviba nenzvimbo dzakazara nemabhodhoro epurasitiki uye mamwe marara: izvi zviri kuratidza zviratidzo zvekusava nehanya kwevanhu vazhinji uye kuzvipira kwevazhinji vanoita zvisarudzo.
Zvakatipoteredza zvakashatiswa zvakanyanya pamusoro pemakore, uye nhamba inowedzera yevashanyi pamberi peCovid-19 yagadzira migwagwa yemigwagwa uye vafambi vanojekesa nzvimbo dzekushanya. Nepo kubva kare kare iyo 'yakachena nzvimbo' chirevo chave chakakora zvakakwana kuti nyanzvi dzishandise uye vashanyi kutenga, kusvibiswa kwezvakatipoteredza kunotyisa zvakakwana kuti tinzwisise: Sezvo entropy isiri iyo inopesana nesimba, asi kusavapo kwayo, saka kusvibiswa hakusi kupesana yehutsanana, asi kusavapo kwayo.
Kana tikawedzera mukusvibisa kukanganisa kweshanduko yemamiriro ekunze uye mamwe matambudziko ezvematongerwo enyika, ehupfumi pamwe nehutano, kusanganisira denda iri, isu tinoziva zvishoma pane budiriro iri pamharadzano dzenzira, ine makakatanwa ane makakatanwa uye nzvimbo dzekuvaka dzinonetsa. Mubvunzo ndewokuti, kupi kwekutangira, kunze kwekunge njodzi dzisingatarisirwi dzimanikidza kuita nekukurumidza?
Chero chero mhando yekutora inoitwa nesimba - pasina simba pane ingori entropy, mamiriro emamiriro ezvinhu. Simba - parizvino rinonyanya kufambiswa nesimba reatomiki, huni nemarasha, kana kukonzerwa nemafuta negasi, harina kumbobvira rakonzera kutemwa nemusoro munyika dzedu dzakabudirira zvikuru. Isu takazojaira kutarisa kupihwa kwesimba se 'kubva pasokisi' sekupihwa.
Nekusahadzika kushoma, hazvo: Kubva pakutanga, simba reatomiki rakatarisana nenjodzi yemwaranzi nedambudziko rekuchengetedza tsvina yenyukireya. Hazvishamisi kuti simba reatomiki rakava chinhu chakanyanya kufarirwa nekufamba kwekuratidzira kwezvakatipoteredza, kunyanya kubva pakawanda tsaona dzemagetsi enyukireya, neChernobyl iri pamusoro wayo muna 1986. Zvaive pachena: Kunyangwe simba reatomiki rakasununguka pakupedza iwo anokanganisa magasi ekupisa magetsi, kushandiswa kwayo murunyararo chinhu chose asi hakukuvadzi.
Panguva yatakanzwisisawo kuti simba remafossil harisi kungokanganisa nharaunda yedu nemamiriro ekunze, asi zvakare zvine mwero mukuwanikwa kwavo. Nguva yakanga yasvika yekutsvaga dzimwe nzira dzemagetsi. Renewables semhepo uye nezuva zvakazviita pamusoro pezvematongerwo enyika musangano wezvemamiriro ekunze, uye pasina nguva Renewable Energy yakasvika pamusoro pechetatu uye nekuwedzera kwesimba rekushandisa kwesimba. Mugwagwa waiita kunge wakavhurika remangwana rakachena remagetsi, dai pakange pasina zvipingamupinyi zvidiki uye zvakakura zvekukunda, kutanga kutaura nezvekuchinja kwemamiriro ekunze uye matambudziko ekuchengetedza.